Baaritaanka dhiigga oo lagu ogaan karo noocyada kansarka (Daraasad cusub) – Kasmo Newspaper
Baaritaanka dhiigga oo lagu ogaan karo noocyada kansarka (Daraasad cusub)
Updated - January 19, 2018 10:25 pm GMT
London (Kasmo), Daraasad lagu shaaciyay khamiistii wargayska ‘Science Magazine‘ waxaa lagu sheegay in 8 ka mid ah noocyada kansarka lagu ogaan karo baaritaan xagga dhgiigga ah.
Cilmi-baarayaasha Xarunta ‘Johns Hopkins Kimmel Cancer Center’ ee Baltimore (USA) waxay qabaan in baaritaanka dhiiggu yahay tillaaba 1aad oo lagu hirgalinayo baaritaan guud oo 1 sambal oo dhiig ah lagu ogaan karo dhammaan noocyada Kansarka iyo halka jirka uu kaga yaallo.
Aqoonyahannadu waxay sharraxayaan in xanuunka kansarku uu dhiigga ku reebo raadad yar oo DNA dhalanrogan ah iyo wax yar oo Protein ah.
Tijaabadan cusub oo lagu magacaabay ‘CancerSEEK’ waxay caddeynaysaa in lagu ogaan karo isbeddellada DNA-da 16ka unugyada kansarka wada ee dhiigga la socda, kuwaas oo caadi ahaan kulmiya noocyada kansarka iyo 8 nooc oo ‘Protein’ ah oo inta badan kansarku sii daayo maarka uu faafo.
Hannaankan cusub ee baaritaanka ah waxaa la sheegayaa in uu awood u leeyahay helitaanka kansarka 1 sano ka hor inta aan lagu arkin qalabka wax lagu baaro ee hadda la isticmaalo.
Tijaabada oo lgu sameeyay dad bukaan ah oo tiradoodu tahay 1005 lagana helay xanuunka Ukumo-galeenka, beerka, caloosha, hunguriga, mindhicirrada, xameetida, sambabbada iyo naasaha, waxay muujisay in ‘CancerSEEK’ lagu ogaan karo 70% unugyadaas.
Khubaradu axay qabtaa in lagu qabi karo kalsooni u dhaxaysa 69% ilaa 98% iyada oo ay ku xirantahay hadba nooca kansarka.
Waxaa kale oo ay qabtaa in marka si kama dambays ah loo dhammaystiro, baaritaanka lagu samayn karo qof kasta sannadkiiba mar, si hordhac ahaan loogu ogaado 8da nooc ee kansarka. Qiimaha isu-gayntoodana waxay khubaradu ku qiyaasayaan ilaa 400 oo Euro oo la mid ah inta ku baxda baaritaanka 1 nooc oo kansar ah.